टिप्पर व्यवसायीका पिडा सरकारले कहिले सुन्ने ? – रामचन्द्र अधिकारी « Niatra TV
टिप्पर व्यवसायीका पिडा सरकारले कहिले सुन्ने ? – रामचन्द्र अधिकारी
अर्को पक्ष भनेको दुर्घटना टिपरको गल्तीले मात्र हुन्छ ? प्रत्येक सडक प्रयोग कर्ता पैदलयात्री दुइ पाग्रे तथा साना सवारी साधानहरु पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
मुख्य समस्या सडक व्यवस्थापन राम्रो नहुनु हो, यसको जिम्मेवार सरकार नै हो । ठूला सवारी साधन र साना सवारी साधनहरु चल्ने सडक फरक फरक बनाउन जरुरी छ। दोस्रो समस्या सवारी चालक(विशेष गरि मोटरसाइकल र स्कुटर चालक)को छ ।
साना सवारी साधन जता पनि घुस्ने र जुन साइडबाट पनि ‌ओभरटेक गर्ने गर्दछन ।त्यस कारण पनि दुर्घटना बढी हुनेछ । सरकारले बनाएका हरेक नीति नियम हामी मान्न तयार छौ तर राती ८ देखि विहान ४ बजे सम्म मात्र टिपर चलाउने नीति हामी मान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौ । मालवाहक टिपरहरु ७/८ टन भारले गर्दा आकस्मिक ब्रेक नलाग्ने वा लाग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले टिपर हिड्ने र दुइ पाग्रे र साना सवारी साधनका लागि बाटो अलग अलग बनाउन जरुरी छ ।
यस विषयमा ट्रक तथा टिपर व्यवसायीले समेत उचित पहल गर्न सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण ट्रक तथा टिपर व्यवसायीमा विशुद्व टिपर व्यवसायी समितिमा नहुनु पनि अहिलेको मुख्य कारण हो ।
सरकारले तोकेको सवै कर तिर्ने तर व्यवसायी गर्न नदिने हो भने कि त सरकारले टिपर गुड्न देशै भरि रोक लगाउनु पर्यो होइन भने हामी आफै सरकारलाइ टिपरको चावी हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुने दिन समेत आउन सक्छ ।